कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो योगले ठीक हुन्छ - Samudrapari.com
कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो योगले ठीक हुन्छ
काठमाडौं – पछिल्लो समय ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपिन, शारीरिक मुभमेन्ट, असहज बसाइलगायतका कारणले ढाड दुख्ने बिरामी बढिरहेका छन् । अस्पतालमा बच्चादेखि वृद्ध उमेरसम्मका मानिसहरू ढाडको समस्या लिएर आउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । दैनिक सामान्य कार्य गरिरहँदा पनि कम्मर दुख्ने समस्या आजकल धेरैलाई हुन थालेको छ । कसैलाई दीर्घकालीन रूपमा सताएको छ भने कसैलाई केही समयसम्म यो समस्याले सताएको छ ।
– घरायसी कामलाई धेरैले सामान्य ठान्छन् । तर, धेरै समयसम्म घरायसी काम गर्दा ढाड तथा कम्मर दुख्ने समस्या हुन सक्छ ।
– कम्मर दुख्नुमा सधैँ शारीरिक श्रम मात्र मुख्य कारण हुँदैन । अनावश्यक रूपमा धेरै मानसिक तनाव लिँदा पनि ढाड दुख्न सक्छ ।
– ठूलो भारी बोक्ने कारणले कम्मरको मांसपेशीमा दबाब पर्न जान्छ । यसले गर्दा पनि कम्मर÷ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ ।
– अगाडि ज्यादा झुकेर काम गर्दा, कडा शारीरिक परिश्रम गर्दा ढाड दुख्छ ।
– घन्टौँसम्म मोबाइल, कम्प्युटरअगाडि बसेर काम गर्नेमा ढाड दुख्ने समस्या देखिने गरेको छ । विभिन्न कारणले हुने दुर्घटनाका कारण पनि
– ढाडको समस्या आउन सक्छ । शरीरका भित्री अंगको समस्याको कारण पनि कम्मरमा दुखाइ हुन सक्छ ।
यसरी गर्नुस् योग
– सबैभन्दा पहिले योगम्याटमा बस्नुहोस् । योगम्याटमा आरामले पल्टनुहोस् । दुवै खुट्टा एक–आपसमा जोड्नुहोस् ।
– अब श्वास लिँदै दायाँ खुट्टालाई माथि सकेसम्म ९० डिग्रीको कोणमा लैजानुहोस् । बिस्तारै श्वास छोड्दै खुट्टा जमिनमा झार्नुहोस् ।
– अब सोही प्रक्रिया देब्रे खुट्टाबाट पनि गर्नुहोस् । एवं प्रकारले अभ्यास १० पटकसम्म दुवै तर्फबाट गर्नुपर्दछ ।
– १० पटक पूरा गरिसकेपछि पुनः एक–एक गरी पालैपालो दुवै खुट्टा माथि ९० डिग्रीमा ३० सेकेन्डसम्म राख्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् ।
– कम्मरदुखाइ भएकाले एकैसाथ दुवै खुट्टा उचालेर अभ्यास गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले एक–एक गरेर अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ ।